WAR CUSUB: Florentino Perez oo xaqiijiyay in Ramos uu ka codsaday ka tagista kooxda Real Madrid – Gool FM
WAR CUSUB: Florentino Perez oo xaqiijiyay in Ramos uu ka codsaday ka tagista kooxda Real Madrid
(Spain) 28 Maajo 2019. Shabakada “Sky Sport” ayaa xaqiijisay in daafaca reer Spain ee Sergio Ramos uu si rasmi ah u codsaday inuu ka tago Real Madrid, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Sky Sport ayaa ka soo xigatay hadal uu madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez ku xaqiijiyay in kabtanka Sergio Ramos uu weydiistay inuu xagaagan ka tago garoonka Santiago Bernabeu.
Florentino Perez ayaa qiray in Sergio Ramos uu weydiistay inuu ka tago Real Madrid, kaddib markii uu dalab aad u xoogan ka helay horyaalka Chinese Super League.
Hadaba hadalka madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez ayaa u dhinaa sidan:
“Ramos wuxuu iigu yimid xafiiskeyga gaarka ah, wuxuuna ii sheegay in dalab aad u xoogan uu ka helay horyaalka Chinese Super League”.
“Laakiin sharciyada horyaalka dalkaas ayaa kahor istaagaya in koox reer China ah ay bixiso qiimaha lagu dhameystiri karo heshiiska”.
Si kastaba ha ahaatee, Sergio Ramos ayaa la kulmay dhaleeceyno badan xili ciyaareedka 2018/2019, kaddib natiijooyinkii niyadjabka ahaa ay la kulantay Real Madrid, waxaana si gaar ah loogu eedeeyay guuldaradii kasoo gaartay kooxda Ajax Champions League, taasoo sababtay inay isaga haraan gabi ahaanba tartanka.
Roberto Martínez oo ka hadlay haddii uu diyaar u yahay inuu tababare u noqdo Barcelona
Klopp oo ka warbixiyay xaalada xiddigaha ka dhaawacan Liverpool, kahor finalka Champions League